Early Pregnancy Lifestyle - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Early Pregnancy Lifestyle
” ကိုယျဝနျရှိစ သညျကာလ “
အခြိနျမှနျပှငျ့နကွေရာသီပနျးလညျးမပှငျ့တော့ဘူး၊ဆီးစဈတံလေးနဲ့စဈကွညျ့တော့လညျး နှဈကွောငျးပျေါနပွေီ…ဒီလိုနဲ့ သခြောအောငျ ဆေးခနျးပွေးပွတော့လညျး ဆရာဝနျက စမျးသပျစဈဆေးပွီး ကိုယျဝနျရှိနကွေောငျး အတညျပွုလိုကျပွီဆိုပါစို့!
ခုလိုကိုယျဝနျရှိစမှာ မိခငျအလြောငျးအလြာတို့ ဘယျလိုပွုမူနထေိုငျစားသောကျသငျ့လဲ?
ကိုယျဝနျအစောပိုငျးကာလအဖွဈသတျမှတျထားတဲ့ ကိုယျဝနျရှိကာစမှ ကိုယျဝနျပထမ (12 )ပတျအတှငျး ဆောငျရနျရှောငျရနျလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော:
အားလုံးသိတဲ့အတိုငျးကိုယျဝနျရှိစမှာ မူးဝပြေို့အနျပွီး အစားစားခငျြစိတျမရှိတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါဟာ သဘာဝဖွဈစဉျတဈခုဆိုပမေမယျ့ ပုံမှနျကိုယျဝနျဆောငျတှထေကျပိုမိုဆိုးရှားစားခံစားနရေမယျ၊ အစားလုံးဝမဝငျတော့တဲ့အထိ ပြို့အနျနမေယျဆိုရငျတော့ ဆေးခနျးပွဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။
✅ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျပွီး အာဟာရပွညျ့ဝတဲ့အစားအစာမြား ရှေးခယျြစားသုံးပါ။
အသငျ့စား၊အလှယျစား၊အမွနျစားအစားအစာတှေ Junk Food တှေ တတျနိုငျသလောကျလြှော့စားပါ။
ကျောဖီ၊လကျဖကျရညျ၊အငျအားဖွညျ့အခြိုရညျ စသော ကဖငျးဓာတျပါတဲ့အရာမြားကို သတျမှတျပမာဏထကျပိုမိုမသောကျသုံးသငျ့ပါ။(ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတှငျ တဈနလြေှ့ငျ ကဖငျး ၂၀၀ မီလီဂရမျအောကျသာ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။)
” အိပျခြိနျ “
✅အိပျရေးဝအောငျအိပျပါ။ (တဈနလြေှ့ငျအနညျးဆုံး 8 နာရီပွညျ့အောငျအိပျပါ။)
” အနအေထိုငျနှငျ့လကေ့ငျြ့ခနျး “
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ နိစ်စဓူဝ အလေးအပငျတှမေနရေတာ၊ ပငျပငျပနျးပနျးအလုပျလုပျရတာဟာ မိခငျရောကလေးအတှကျပါ မကောငျးတာမှနျပမေယျ့ တနကေုနျတနခေမျး အိပျနေ၊လှုပျရှားမှုမရှိခွငျးဟာလညျး ကနျြးမာရေးနဲ့မကိုကျညီပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ အရမျးမပငျပနျးမယျ့…အိမျအလုပျ ရုံးအလုပျ နတေ့ဓူဝအလုပျမြားကို ပုံမှနျလုပျဆောငျပါ။နားခြိနျမှာအပွညျ့အဝအနားယူပါ။
ခန်ဓာကိုယျသှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးစရေနျ လမျးလြှောကျခွငျး အပွငျ ကိုယျဝနျဆောငျမြားနဲ့သငျ့လြျောမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား၊ယောဂကငျြ့စဉျမြား ဆောငျရှကျပွုလုပျပါ။
” ဝတျစားဆငျယငျမှု “
ဗိုကျမထှကျသေးတဲ့ကာလဖွဈတာကွောငျ့ ဗိုကျဖုံးအကြီင်္ဝတျဖို့အထိမလိုသေးပမေယျ့ မိမိသကျတောငျ့သကျသာရှိမယျ့ အဝတျအစားမြိုးရှေးခယျြဝတျဆငျပါ။
❌ဒေါကျဖိနပျစီးခွငျးဟာ ခါးနာစနေိုငျခွငျး၊မတျောတဆခြျောလဲနိုငျသညျ့အန်တရာယျရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ဒေါကျဖိနပျစီးဖို့မသငျ့တျောပါဘူး။
❌ကိုယျဝနျစောပိုငျးကာလ (ပထမ 12 ပတျမှာ)ခဈြခဈြနဲ့ ခဈြရညျလူးခွငျးကို ခတ်ေတခဏစောငျ့ထိနျးပါ။
❌ မလှဲမရှောငျသာအခွအေနမြေိုးဖွဈလာခဲ့ပါကလညျး ကွမျးတမျး ပွငျးထနျသော၊ ပုံမှနျမဟုတျသော ခဈြရညျလူးသညျ့အနအေထား နညျးစနဈမြားကို ရှောငျကွဉျပါ။
✅ဆရာဝနျညှနျကွားထားသော ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးမြားကို မပကျြမကှကျသောကျပါ။
” ကိုယ်ဝန်ရှိစ သည်ကာလ “
အချိန်မှန်ပွင့်နေကြရာသီပန်းလည်းမပွင့်တော့ဘူး၊ဆီးစစ်တံလေးနဲ့စစ်ကြည့်တော့လည်း နှစ်ကြောင်းပေါ်နေပြီ…ဒီလိုနဲ့ သေချာအောင် ဆေးခန်းပြေးပြတော့လည်း ဆရာဝန်က စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုပါစို့!
ခုလိုကိုယ်ဝန်ရှိစမှာ မိခင်အလျောင်းအလျာတို့ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်စားသောက်သင့်လဲ?
ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိကာစမှ ကိုယ်ဝန်ပထမ (12 )ပတ်အတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်:
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဝန်ရှိစမှာ မူးဝေပျို့အန်ပြီး အစားစားချင်စိတ်မရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုပေမမယ့် ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေထက်ပိုမိုဆိုးရွားစားခံစားနေရမယ်၊ အစားလုံးဝမဝင်တော့တဲ့အထိ ပျို့အန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးခန်းပြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
✅ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာများ ရွေးချယ်စားသုံးပါ။
အသင့်စား၊အလွယ်စား၊အမြန်စားအစားအစာတွေ Junk Food တွေ တတ်နိုင်သလောက်လျှော့စားပါ။
ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်၊အင်အားဖြည့်အချိုရည် စသော ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့အရာများကို သတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုမိုမသောက်သုံးသင့်ပါ။(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် တစ်နေ့လျှင် ကဖင်း ၂၀၀ မီလီဂရမ်အောက်သာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။)
” အိပ်ချိန် “
✅အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ (တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး 8 နာရီပြည့်အောင်အိပ်ပါ။)
” အနေအထိုင်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း “
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ နိစ္စဓူဝ အလေးအပင်တွေမနေရတာ၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရတာဟာ မိခင်ရောကလေးအတွက်ပါ မကောင်းတာမှန်ပေမယ့် တနေကုန်တနေခမ်း အိပ်နေ၊လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းဟာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။
ဒါကြောင့် အရမ်းမပင်ပန်းမယ့်…အိမ်အလုပ် ရုံးအလုပ် နေ့တဓူဝအလုပ်များကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ။နားချိန်မှာအပြည့်အဝအနားယူပါ။
ခန္ဓာကိုယ်သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေရန် လမ်းလျှောက်ခြင်း အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနဲ့သင့်လျော်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ယောဂကျင့်စဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ပါ။
” ဝတ်စားဆင်ယင်မှု “
ဗိုက်မထွက်သေးတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့် ဗိုက်ဖုံးအကျီင်္ဝတ်ဖို့အထိမလိုသေးပေမယ့် မိမိသက်တောင့်သက်သာရှိမယ့် အဝတ်အစားမျိုးရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။
❌ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းဟာ ခါးနာစေနိုင်ခြင်း၊မတော်တဆချော်လဲနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒေါက်ဖိနပ်စီးဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။
❌ကိုယ်ဝန်စောပိုင်းကာလ (ပထမ 12 ပတ်မှာ)ချစ်ချစ်နဲ့ ချစ်ရည်လူးခြင်းကို ခေတ္တခဏစောင့်ထိန်းပါ။
❌ မလွှဲမရှောင်သာအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါကလည်း ကြမ်းတမ်း ပြင်းထန်သော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ချစ်ရည်လူးသည့်အနေအထား နည်းစနစ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
✅ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးများကို မပျက်မကွက်သောက်ပါ။
” သားသားမီးမီးယူတော့မယ်ဆိုရင် ” (အပိုင်း ၁)